eNasha.com - कन्सर्टमा कण्डम र ढुङ्गा
हाम्रा सङ्गीतका दर्शक यति 'अनुशासित' छन् कि राम्रो प्रदर्शन देखे भने 'मन' थेग्नै सक्दैनन् । आफ्नो वरपर कण्डम भए कण्डम फुकेर उडाइदिन्छन् कि त ढुङ्गा भेटे ढुङ्गैले गायकगायिकालाई मुर्‍याइदिन्छन् ।
प्रसङ्ग हालै सम्पन्न मेरो मोबाइलको कन्सर्टको हो । गएको साता बुटवलमा सम्पन्न मेरो मोबाइलको कन्सर्टमा उत्तेजित भीडले ढुङ्गाले हाने । कार्यक्रममा सहभागी गायक सुजील कर्मचार्यलाई निधारमा ढुङ्गाले लाग्यो र उनी त्यहीँ झन्नै मूच्छिर्त भए । तर उनको हिम्मत हेर्नुस्, उनले कार्यक्रम नबिथोलियोस् भनेर आफ्नो दुखाईलाई महत्व नदिई कार्यक्रममा गीतारवादनलाई जारी राखे ।
"कार्यक्रम एकदमै सफल भयो, तर ढुङ्गाले लागेपछि कार्यक्रम लगभग रोकिएला झैँ भयो", कार्यक्रमको रात गायक सुजीलले इनशाडटकमलाई फोनमा बताएका थिए ।
यो घटना कन्सर्ट इतिहासमा नयाँ होइन । एक दुइ वर्षअघि पोखरामा आयोजित एउटा कन्सर्टमा गायिका मौसमी गुरुङलाई मन पराउने दर्शकले फूलले होइन- ढुङ्गाले स्वागत गरिदिए । उनको आँखा झन्नै फुटेको थियो । उनलाई तत्काल पोखरास्थित मणिपाल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । उनको आँखा छेउमा चार टाँका लगाइएको थियो । उनको घाउ त निको भयो, तर त्यो घटनालाई उनले अहिलेसम्म बिर्सन सकेकी छैनन् । भन्छिन्- "पूरा कार्यक्रमको मजा बालुवा भयो ।"
सामान्यतया साङ्गीतिक कार्यक्रमहरुमा जाँडरक्सी र लागू औषध खाएर दर्शकहरु आउने, कार्यक्रमस्थलमा ढुङ्गा, पानीका बोतल ल्याउने अनि प्रदर्शनीको उग्रतामा ढुङ्गा, पानीका बोतल र कण्डमका फुकुण्डा उडाउने नेपाली पपस्रोताहरुको धेरै अघिदेखिको नियमित क्रम बन्न थालेको थियो । तर आफ्नो मनपर्ने कलाकारलाई टाउकै फुटाउने गरी गरिएको आक्रमण भने आश्चर्यलाग्दो छ ।
त्योभन्दा अघि मीनभवनमा एउटा कन्सर्ट हुँदा दर्शकमध्ये केहीले कार्यक्रमस्थलमा कण्डम फुकेर उडाइदिए । त्यसपछि विस्तारै महिला दर्शकहरु भाग्न थाले ।
आखिर किन कन्सर्टमा यसरी पानीको बोतल, ढुङ्गा या कण्डम उडाइन्छ ? यो प्रश्नमा धेरै जना नाजवाफ छन् । तर पनि केही भन्छन्- यो दमित यौन कुण्ठा, दमित चाहनाको उपज हो । तर यो कस्तो चाहना हो, जसमा आफूलाई ज्यादै मनपर्ने गायकगायिकालाई पीडा पुर्‍याएर, प्रशंसक रमाउँछ- अथवा हाम्रा दर्शक कति अज्ञानी, हाम्रा सङ्गीतप्रेमी कति अराजक- जसले सर्जकलाई पीडामा देख्न चाहन्छ !
अनुभव events विचार सङ्गीतकार रिलिज लुकेका कुरा समुद्रपार ट्रयाक बाहिर तातोपीरो नेपाली तारा क्या बात ! भिडन्त कीर्तिमान अवार्ड उपलब्धि गायिका पेज थ्री प्रेम र विवाह गायक कन्सर्ट